Princess Njikọ! A: Amaba bụ gacha RPG na nnọọ nwanyị akpaka ọgụ | Gam akporosis
Princess Njikọ! A: Dive bụ gacha RPG nwere ezigbo ọgụ nwanyị
Princess Njikọ! A: Dive bụ gacha ọzọ RPG na-ewere ọtụtụ egwuregwu ka obi ya ka ya onwe ya ga-ebu ya site ya manga ịke na ndị ọcha maara nke ọma na ihe niile na akpaka ọgụ.
Eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-esi ike ịmata ọdịiche dị n’etiti otu na nke ọzọ,, ebe ọ bụ na anyị na-enweta ụdị mwakpo nke ụdị egwuregwu a, nke bụ maka nkọwa ụfọdụ nwere ike ịkwanye otu ma ọ bụ ọkpụkpọ ọzọ. Bụrụ na ọ bụ ezie, anyị ahụtụbeghị ọtụtụ egwuregwu dị ka porridge a, yabụ ka anyị soro Princess Princess a! A: amaba.
1 Egwuregwu akpaaka ka ọ bụrụ ndị kachasị mma
2 Princess Njikọ! Azịza: Dive na-agbaso usoro a
3 Nwanyị gacha
Egwuregwu akpaaka ka ọ bụrụ ndị kachasị mma
Princess Njikọ! A: amaba soro nkwenye na egwuregwu a dịgasị iche iche nke gacha jikọtara na n'ihi na akpaka ọgụ na-adọta site na isi iyi nke mmụọ nsọ dị na ga-abụ Final Fantasy; ọ bụ ezie na-ekwu eziokwu, akpaka na-abịa ọzọ site na mobile na ozugbo.
Ọ bụ ọgbọ ọhụrụ na-akwalite ụdị egwuregwu a nke na n'ime nkeji nkeji ị nwere ike ịkwalite ma kpochapụ ọtụtụ narị ndị iro nke ọkwa niile na nha. Nnukwu ihe dị iche na ihe MMO na ntanetị nke ị nọrọ ọtụtụ awa na-egweri iji gafere nke larịị.
Ma eleghi anya ọ bụ nke a bụ ihe kachasị mma maka ụfọdụ iji kpọọ ụdị egwuregwu RPG asị gacha nke afọ ojuju dị na ọrụ nka, njirimara agwa, olu ndị Japan ahụ na ihe na ngwa ọgụ anyị na-emeghe.
Princess Njikọ! Azịza: Dive na-agbaso usoro a
Megabytes na megabytes ibudata mgbe anyị na-ahụ ihe atụ ndị ahụ dị ka ọtụtụ manga nakwa na ha na-abụ abụ kacha mma n'akụkụ ọzọ nke ụwa.
A ghaghi ikwu na na nke a, a na-emegharị ihe ngosi na ihe nkiri na-eme ka ọ gabiga ihe ọ ga - abụ usoro ihe nkiri dị ka Candy Candy ma ọ bụ ndị Hayao Miyazaki kere. Site n'echiche ahụ, a ga-eto ọrụ a rụrụ na nke a, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'asụsụ Spanish ma anyị ga-edozi maka asụsụ Bekee iji ghọta akụkọ ihe mere eme nke RPG a.
Anyị nwere enwere ike imeghe ụmụ nwanyị 50, onye ọ bụla nwere olu ha na-arụ ọrụ nke ọma; Dị ka anyị na-ekwu, anyị fọrọ nke nta ka anyị chee ihu na manga animated nke anyị nwere ike ịtụ anya tupu ọgụ ndị protagonists anyị na-alụ.
Ọ bụrụ na-amasị gị ihe odide nke nwanyị na manga, na Princess Njikọ! A: Dive ị gaghị ada mbà ịmara akụkọ nke ọ bụla na otu ha si eche ndị iro ahụ ihu. Ihe na-atọ ọchị banyere egwuregwu a bụ na anyị ga-enwe ike ịgabiga ọgụ iji lekwasị anya na akụkọ ahụ.
Ma ewezuga otu esi ahụ ọgụ ndị ahụ na ihe ngosi ha na ihe ndị ọzọ, akụkọ ahụ bụ ihe mmeri Princess Njikọ! A: Dive na manga mara mma nke ahụ nwekwara nkà site na mmalite.
Princess Njikọ! A: Dive na-anụ ọkụ n'obi ka ị banye n'ụgbọ nyocha 50.000 ya na nke nwere ugbua nwere na Storelọ Ahịa ka i wee nwee ike ịnụ ụtọ RPG ya na manga animated ya; echefula na kacha ọhụrụ site na Square Enix.
A gacha RPG na 50 heroines na a dum akụkọ site na animated manga nke elu graphic mma.
Olu ọbụna na Japanese na-adọta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Princess Njikọ! A: Dive bụ gacha RPG nwere ezigbo ọgụ nwanyị
N'ime ụbọchị ole na ole, a ga - arụ ọrụ Galaxy F62: ọ ga - abata na igwefoto 64 MP na batrị 7000 mAh
Ndị okike Fortnite ga-ahapụ gị ka ị kpọọ "chi" site na ịmepụta mmadụ dijitalụ